Iindlela zokuKhuthaza iBlog ezivela kwiiNgcali eziPhezulu zeNtengiso Martech Zone
Iindlela zokuKhuthaza iBhlog ezivela kwiiNgcali eziPhambili zeNtengiso
NgoLwesine, uJuni 12, 2014 NgoLwesine, uJuni 12, 2014 Douglas Karr
Isicwangciso sokubloga esiyimpumelelo akukho lula kodwa ayisiyonyani yesayensi. Abanye abantu bacinga ukuba "Ukuba ubhloga, baya kuza…" kodwa akukho nto inokuqhubeka inyanisile. Ngokuqinisekileyo, unokutsala abantu kwibhlog yakho ngokuhamba kwexesha kwaye unokwaneliseka yile nto. Kodwa ukuba awulufumani uhlobo lwamanani kufuneka ugcine isicwangciso esikhulu sokubloga kwaye ufumane imbuyiselo ngexesha olichithayo, kuya kufuneka yazisa ibhlog yakho!
I-9 yeyona ndlela inamandla yokuKhuthaza iiBlog ezivela kwiiNgcali eziPhezulu zeNtengiso ku Ukuhanjiswa kweCandy Iqonga leenkqubo zokujonga-umhlobo kwiivenkile ze-ecommerce, uququzelele kwaye wabonisa umfanekiso omnandi we-infographic yeekowuti ezivela kubathengisi abaphezulu bezinto kunye Eyona ngcebiso yokukhuthaza ibhlog kwiwebhu.
Ngaphambi kwayo yonke enye into, ibhlog yakho kufanelekile iliwa
Ungavumeli iinzame zakho ziye elubala, qiniseka ukuba kunjalo inokukhangelwa
Umzobo upeyinta amagama aliwaka, sonke ezibonwayo zidalwa
Yazi eyakho joliswe kuyo abaphulaphuli
Yiba ngumntu nge email (yongeza imveliso yethu, I-CircuPress!)
Yenza joliswe kuwo usasazo
Yandisa ukubanakho kwe Imidiya yokuncokola
Qiniseka ukuba ufunda ukuba ungayenza njani enye yezi zinto kwezi zinto zingakholelekiyo kwizicwangciso zokunyusa ibhlog!
tags: adam ukudibanisahoffman umntuNgobuhlakaniIbhili gassettIbhili ye-sebaldukukhuthazwa kweblogiibrian deanUCarol amatoUCarol lynn riveraicendrine marrouatUChris Brogancynthia sanchezUDan norrisdavid leonhardtelisa gabberteric siugregory ciottiUncedokucacisiwejames itshatijames icacileujames schramkojason acidrejason demersujimmie lanleyjohn lee dumasjoost de valkkim okrakralindsay ostromphawula traphagenUbunzima bemeganmelonie dodaromike alltonmitt rayNeil patelisikhonkwane fitzpatrickpeter sandeenyazisa ibhlog yakhorae offmanukuthunyelwarichard marriotiryan deisssophie icilikisheUSteve webbutywalavenchito itampuigamayoastzac johnson
Ukwenza ubuqu kuqala
Seismic: AmaXwebhu okuThengisa amaDynamic kunye neMiboniso